China Breathable Pet Car Bag Bag sy orinasa | Kinghow
Kitapo mitondra biby miaina
Black Unisex Cool Travel Laptop Waterproof School Ba ...
Kitapo Backpack Fitaovana Hockey Fampitaovana lehibe
Custom Design Fashion Lady Bagbags 500D CORDURA® To ...
Tote Bag Diaper misy tady stroller
Kitapo Messenger Messenger Kitapo
Kitapom-batsy mangatsiaka kokoa tsy misy tantera-drano
Kitapo kitapo fitsangatsanganana miaraka amin'ny seranan-tsambo USB
Kitapo mangatsiaka kokoa misy porofo mivaingana 30 sans
Kitapo miaramila 40L miaramila Tactical Backpack
Kianja vita amin'ny kitapo vita amin'ny kitapom-batsy PVC
Kitapo solosaina finday ho an'ny dia any amin'ny orinasa
Nankatoavina tamin'ny zotram-piaramanidina ny mpitatitra alika anay ary nasiany sisiny anatiny sy malefaka, mahatonga ny biby fiompy hahatsapa ho milamina sy milamina ao anatiny ary te hipetraka sy hatory kely.
Pet Carriers Features
Raiso soa aman-tsara miaraka amin'ny mpitatitra malefaka ny biby fiompinao. Natao mba hiarovana ny biby, tsy hanana ahiahy ary hahazo aina. Ity mpitatitra biby ity dia mety amin'ny fitsangatsanganana amin'ny fiaramanidina na fiara na hitsidihana mpitsabo biby fotsiny ary mety ho an'ny alika sy saka milanja hatramin'ny 15lbs.
Volavola matanjaka sy azo antoka:
Ho an'ny fitaterana azo antoka, ny transporter dia miaraka amina boribory 2 azo ampifandraisina hitaterana ilay biby sy hitazomana ny fandanjana.
Izy io koa dia misy fehin-tsoroka azo ovaina mba hitondra azy nefa tsy mampiasa tananao. Izy io dia azo aforitra ary apetraka ao ambanin'ny sezan'ny fiaramanidina; Amin'izany dia afaka mitondra ny biby fiompinao foana ianao nefa tsy mila mandeha misaraka.
Ny fanohanana ny biby dia misy fisokafan'ny sisiny hamelana ny biby hiditra tsy misy olana. Ilay zipper mateza dia mitazona ny varavarana mihidy mafy mandritra ny fitaterana.
Ireo takelaka misy rivotra misy rivotra miaina amin'ny lafiny telo dia tsy manome antoka fotsiny ny fikorianan'ny rivotra, fa mamela ny biby hijery ihany koa.
Ny fiorenan'ny biby dia manana fototra azo esorina izay mamorona faritra matevina sy milamina ho an'ny biby fiompinao, miaraka amin'ny karipetra volony azo esorina.
Manolotra farafara ahazoana aina alohan'ny biby fiompinao mandritra ny dia. Safidy mety indrindra ny mandeha miaraka amin'ireo biby fiompinao.
Fampahalalana momba ny fiarovana: Aza avela tsy misy mpiambina ilay biby mandritra ny fitaterana azy. Rehefa mandeha fiara ianao dia apetraho amin'ny seza aoriana ilay mpitatitra.
Fanadiovana: ny kapoaka volon'ondry malefaka dia azo esorina ary hosasana eo am-pelatanana, raha tsy afaka manadio ny fononteny ao amin'ny tasy fotsiny ianao.
Refy: 41.1 * 24 * 30.7cm /16.2 * 9.45 * 12.1 santimetatra (Azafady refeso ny habeny sy ny lanjan'ny biby fiompinao alohan'ny hividianana)
Ny fonosana dia misy:
Karazan'orinasa: Mampivoatra, manamboatra ary manondrana mihoatra ny 15 taona
Vokatra lehibe: Kitapo kitapo avo lenta, kitapo fitsangantsanganana ary kitapo fanatanjahan-tena any ivelany ......
mpiasa: Mpiasa efa za-draharaha 200, developer 10 ary 15 QC
Taona nananganana: 2005-12-08
Fanamarinana momba ny rafitra fitantanana: BSCI, SGS
Factory Location: Xiamen sy Ganzhou, Sina (Tanibe); 11500 metatra toradroa ny totaliny
Fanodinana ny famokarana
1. Fikarohana sy fividianana ny kojakoja rehetra sy ny fitaovana ilain'ity tetik'asa kitapo ity
Loko lamba lehibe
2. Hetezo ny lamba, ny lamba hafa ary ny fitaovana hafa rehetra ho an'ny kitapo
3. Fanontana amin'ny lamba landy, fanaovana amboradara na asa tanana Logo hafa
4. Manjaitra ny prototype tsirairay ho vokatra semi-vita, avy eo amboary ny faritra rehetra mba ho vokatra farany
5. Mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny antsipiriany ireo kitapo, ny ekipanay QC dia manamarina ny fizotrany rehetra avy amin'ny fitaovana ka hatramin'ny kitapo vita mifototra amin'ny rafitray Quality Strict
6. Ampahafantaro ny mpanjifa mba handinika na handefa santionany betsaka na santionana fandefasana amin'ny mpanjifa ho an'ny fizahana farany.
7. Manangona ny kitapo rehetra izahay araka ny famaritana fonosana avy eo alefa
Previous: Kitapo kitapo fivarotana mafana - Kitapo mpitondra kitapo kitapo - Kinghow
Manaraka: Mpikarakara kitapo fitsangantsanganana momba ny dia lavitra
Leakproof Soft Cooler Backpack Beach fitobiana
Fonosana kitapom-batsy ho an'ny olona 1-2
Kitapo mangatsiaka kokoa vita amin'ny insulated ho an'ny filasiana
Mpiambina alika malemy azo aorina